Fametahana tarika plastika plastika vita amin'ny plastika China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Fametahana vy vita amin'ny plastika,Band Band,Famatorana biby fiompy biby
Home > Products > Strapping > Pet Strapping > Fametahana tarika plastika plastika vita amin&#39;ny plastika
Fametahana tariby plastika vita amin'ny plastika amin'ny alikaola dia afaka ampiasaina ho toy ny safidy ny fehikibo vy fehikibo iray na ny tariby-vy miaraka amin'ny tanjaka fihenjanana mitovy. Fa ny lanjan'ny vy vita amin'ny plastika dia mametaka ny 1/6 amin'ireo fitaovana fonosana ireo, izay mety hamonjy ny vidin'ny fonosana 50%. Ny tarika fantsom-biby dia afaka mihazona hery mahery vaika 5% amin'ny fofonaina mandritra ny fotoana maharitra, rehefa entin'ny hery mahery vaika izy, dia manana elongation buffer 5% ho fiarovana ny entana amin'ny fahasimbana. Ary mandritra ny fonosana sy ny famoahana entana dia tsy hanimba ny mpandraharaha ny fametahana biby.
Plastika vy mametaka ny tarika petra fantsona vita amin'ny PET, manana vidiny kely, tahiry, fiarovana ny tontolo iainana, maharitra, endri-pandrihana avo dia avo, fanatsarana biby fiompy hanatsarana ny fahombiazan'ny fikarakarana ny tanana, hampitombo ny habetsaky ny fampiasana ny habakabaka. Fametahana vy vita amin'ny plastika izay ampiasaina amin'ny fonosana hazo, famonosana vy, fonosana fitaratra, famonosana vy sns.
Fametahana vy vita amin'ny plastika
Plateurs vita amin'ny plastika
Fametahana vy vita amin'ny plastika Band Band Famatorana biby fiompy biby Famonosana vita amin'ny plastika Fonosana vita amin'ny plastika Famolavolana plastika vita amin'ny plastika Famoronana plastika vita amin'ny plastika Plateurs vita amin'ny plastika